မောင်စေတနာ: Desktop မြင်ကွင်းဆန်းများ
Desktop မြင်ကွင်းဆန်းဆန်းတွေကို ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ လှပတဲ့ မြင်ကွင်းဆန်းလေးတွေနဲ့ စိတ်ကြည်နူးစွာ အလုပ်လုပ်ချင်သူများ အောက်မှာသာ ယူပေတော့ဗျာ။
software တွေအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ..ဗစ်စတာ အတွက်ရော မရှိဘူးလား..နောက်တခုလောက်မေးချင်လို့ ..ကျနော့်စက် ဗစ်စတာ မှာ desktop background ပြောင်းလို့ မရတော့လို့အနက်ရောင်ကြီးပဲပေါ်နေတယ်ဗျ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးး..သိရင် ကူညီပါအုံးဗျာ.
9:32 PM, March 06, 2009
jurassic ပြောသလိုပဲဗျာ ကျနော့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ desktop backgroundမှာ အနက်ရောင်ကြီးပေါ်နေတယ် အဲဒါဘယ်လိုပြန်လုပ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။ နောက်ပြီေးတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမပေါ်ဘူးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါဦး။
11:11 AM, May 11, 2009
hi brother i already install that but i don't to use that page How can i do uninstill again.pls reply me.my gmail acc is elcerdothomas@gmail.com.thank.
7:54 PM, September 21, 2010